Kali Linux 2020.3 waxay la timid isbeddel ka yimid bash ilaa ZSH, horumarin loogu talagalay HiDPI iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Kali Linux 2020.3 waxay la timid isbeddel ka yimid bash ilaa ZSH, horumarin loogu talagalay HiDPI iyo inbadan
Daahfurka nooca cusub ee qaybinta caanka ah ee Linux ee Pentest-kaKali Linux 2020.3. XNUMX”, Taas oo lagu soo bandhigayo horumarinno kala duwan oo ku saabsan muuqaalka qaybinta, iyo sidoo kale isbeddello muhiim ah oo ku saabsan xirmooyinka la bixiyay.
Kuwa aan aqoon u lahayn Kali Linux, waa inaad ogaataa in nidaamkan loogu talagalay in lagu tijaabiyo nidaamyada nuglaanta, xisaabinta, falanqaynta xogta hadhay iyo aqoonsiga cawaaqibka weerarrada xun.
1 Kali Linux 2020.3 Waxyaabaha Cusub ee Cusub
2 Soo dejiso oo hel Kali Linux 2020.3
Kali Linux 2020.3 Waxyaabaha Cusub ee Cusub
Kuwa ugu waaweyn ee la xayaysiiyo qaabkan cusub waa guuritaan ka Bash ilaa ZSH. Waqtiga xaadirka ah ee nooca hadda jira, ZSH waxaa loogu daray ikhtiyaar ahaan, laakiin nooca soo socda, marka terminal la furo, ZSH wuxuu ku bilaabi doonaa asal ahaan.
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay u wareegaan ZHS iyagoon sugin sii deynta mustaqbalka, waxay ordi karaan "chsh -s / bin / zsh").
Isbeddel kale oo la hirgeliyey waa dardargelinta rakibidda.n, tan iyo markii qaabkan cusub waxaa la soo jeediyay in la joojiyo socodsiinta dib-u-hagaajinta inta lagu jiro rakibiddaMaaddaama rakiyuhu had iyo jeer haysto dhammaan baakadaha lagama maarmaanka u ah rakibidda khadka tooska ah, laakiin haddii rakibidda la sameeyo iyada oo aan la carqaladeynin shabakadda, rakibayaashu si otomaatig ah ayey u shaqeynayaan.
Taasi waa sababta hadda waxaa la soo jeediyay in isticmaalaha uu yahay kan hadda sameeya cusbooneysiinta haddii aad u malaynayso inay tahay waqti ku habboon.
Sidoo kale, marka la rakibayo nidaamka iyada oo aan la xiriirin shabakad, liistada horay loo sii cayimay ee keydinta shabakadda ayaa hadda la bixiyaa halkii laga heli lahaa faylasha liistada.
Dhinaca kale, mid ka mid ah riwaayadaha noocyadan cusub ayaa ah kordhinta taageerada qalabka ARM, oo ay ku jiraan isbeddelada lagu hagaajinayo waxqabadka Pinebook, Pinebook Pro, Raspberry Pi, iyo ODROID-C.
Intaa waxaa sii dheer desktop-ka GNOME waxaa lagu xushay iyadoo la adeegsanayo maqaar cusub oo ku jira maareeyaha faylka Nautilus, marka lagu daro hagaajinta hagaajinta darfaha iyo madaxyada buullayda ah (tusaale ahaan goobaha, dhinac-gees waxay u egtahay sii wadida guddiga sare).
Y nooc Win-Kex ah ayaa la soo jeediyey (Windows + Kali Desktop Experience), oo loogu talagalay inuu ku shaqeeyo Windows-ka jawiga WSL2 (Windows Subsystem for Linux).
Sidoo kale ayaa lagu daray amarka kali-hidpi-mode si otomaatig u qaabeeyo ee nidaamyada shaqeeya oo leh muuqaal cufnaan sare leh (HiDPI)
Ugu dambeyntii, gudaha xayeysiiska NetHunter 2020.3 sii deynta ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay, jawi loogu talagalay aaladaha mobilada ee ku saleysan barnaamijka Android oo leh xulasho qalab ah oo lagu tijaabiyo nidaamyada u nuglaanta.
Adoo adeegsanaya NetHunter, waa macquul in la xaqiijiyo hirgelinta weerarada gaarka ah ee aaladaha mobilada, tusaale ahaan, ku dayashada aaladaha USB-ka (BadUSB iyo Keyboard HID - kudayashada adabtarada shabakada USB ee loo isticmaali karo weerarada MITM, ama kiiboodhka USB-ka sameeya beddelka astaamaha) iyo abuuritaanka dhibco marin u helid been abuur ah (MANA Evil Access Point).
Isbedelada NetHunter 2020.3 Tilmaan ku darista qayb cusub oo ka mid ah korontada 'Bluetooth Arsenal', kuwaas oo ay ka mid yihiin ogaanshaha u gaarka ah Bluetooth, kormeerka, buufinta, iyo qalabka beddelka baakadaha iyo ayaa ku daray taageerada Nokia 3.1 iyo qalabka Nokia 6.1.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato noocaan cusub, waad hubin kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Soo dejiso oo hel Kali Linux 2020.3
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay tijaabiyaan ama si toos ah ugu rakibaan nooca cusub ee distro kombiyuutarkooda, waa inay ogaadaan inay soo dejisan karaan sawir buuxa oo ISO ah (3.7 GB) ama sawir dhimis ah (2.9 GB) oo horayba u jiray ayaa loo soo dejisan karaa bogga rasmiga ah ee qaybinta.
Dhismayaasha waxaa loo heli karaa x86, x86_64, naqshadaha ARM (armhf iyo armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Marka lagu daro isku-darka aasaasiga ah ee Gnome iyo nooc hoos loo dhigay, noocyo kala duwan ayaa lagu bixiyaa Xfce, KDE, MATE, LXDE iyo Enlightenment e17.
Ugu dambeyntii haa Waxaad horeyba u ahayd isticmaale Kali Linux, kaliya waa inaad tagtaa xaruntaada oo aad ku fulisaa amarka soo socda taas ayaa mas'uul ka noqon doonta cusbooneysiinta nidaamkaaga, markaa waa lagama maarmaan in lagu xiro shabakada si loo awoodo in loo fuliyo howshan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Kali Linux 2020.3 waxay la timid isbeddel ka yimid bash ilaa ZSH, horumarin loogu talagalay HiDPI iyo inbadan